Iraq Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Iraq'
February 20, 2017 – Ciidamada dalka Ciraaq ayaa saakay aroortii bilaabay howlgal cusub oo ay ciidamada ururka ISIS/Daacish uga sifaynayaan dhinaca galbeed ee Magaalada Mosul oo ay gacanta ku hayaan laga soo bilaabo sanadkii 2014-kii. Ciidamada Dowlada Ciraaq oo gacan ka helaya xulfada NATO, ayaa ku guuleystay inay Bariga magaalada Mosul ka saaraan kooxda ISIS, balse …
November 24, 2016 – Magaalada Mosul oo ay ku dagaalamayaan ciidamo Xulufo ah oo taageersan dowladda dalka Ciraaq iyo ururka mayalka adag ee Daacish, ayaa waxa uu xaalka iminka isku bedelay mid aad cakiran, maadaama ay kooxahani ku dul dagaalamayaan shacabka ku dhaqan magaaladaasi. Duulaankan lagu qaaday MagaaladaMosul ayaa ahaa mid ay ciidamadani u diyaar …
November 22, 2016 – Waxaa weli si xawli ah ku socda hawlgaladda la doonayo in dagaalyahanada Ururka Daacish looga nadiifiyo xaafadaha hore ee magaalada Mosul, iyadoo halkaasi oo uu ka socdo dagaal jilbaha looga murxay. Ciidamada xulufada ah ee u badan Kurdida iyo shiicada ayaa isku dayaya inay xaafadaha magaalada ay ka koobantahay gudaha u …
November 13, 2016 – Magaalada Mosul oo ah magaalo qadiimi ah ayaa soo martay marxalado kala gadisan, iyadoo magaaladani ay waligeed ahayd magaalo kala qaybisa dadka muslimiinta ah ee Shiicada iyo Sunnida. Hadaba Barnaamijkani ayaa waxaa loogu guda galayaa taariikhdii ay soo martay magaaladani. Magaalada qaniga ah ee Mosul ayaa waxaa hadda u tartamaya dalal …
Dagaalka Magaalada Mosul oo Cakiran iyo Ciidamada Ciraaq oo La Kulmaya Iska Caabin Xoogan (VIDEO)
November 06, 2016 – Dagaalka Magaalada Mosul ayaa noqday mid cakiran, waxaana ciidamada dowladda ciraaq ay la kulmayaa iska caabin xoogan, iyadoo dagaalyahanada Daacish ay adeegsanayaan xeelado iyo xirfado cusub, waxaa ayna dhufaysyo ka samaysteen guryaha hoostooda si aysan diyaaraha u arag. Dagaalyahannada ururkaasi ayaa lagu soo warramayaa in ay ciidanka Ciraaq ku weerarrayaan gantaallada …
October 31, 2016 – Ciidamada dalka Ciraaq iyo Xulafadooda ayaa fooda galiyay tuuladii u dabbeysay, ka hor Magaalda Mosul, waxana ay ciidamada isku diyaarainayaan sidii ay gudaha u geli lahaayeen magaaladaasi Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalka Ciraaq. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka Argagixisada ee loo yaqaano CTS …
Ciidamada Xulufada oo aad ugu Dhawaaday Magaalada ay Daacish ka Taliso ee Mosul (VIDEO)
October 26, 2016 – Waxaa sare usii kaceysa tirada dadka Shacabka ah ee ka qaxaya magaalooyinka u dhaw dhaw magaalada Mosul ee waqooyiga dalka Ciraaq, kadin markii Ciidamada Xulufada ay xoreeyeen goobahaasi. Magaaladaasi oo ay hada ku hareeraysan yihiin ciidamada Dowlada Ciraaq, kuwa Kurdida iyo maleeshiyaad kale oo badan ayaa la filayaa inay dhawaan ka …
October 24 , 2016 – Dagaalka ay Ciidamada xulufda ku doonayaan inay magaalada Mosul ugala wareegaan uruka ISIS ayaa waxa uu bilaawday labo Isbuuc ka hor, iyadoo ilaa iyo Hadda Ciidamada uu Maraykanka Horkacayo ay la wareegeen Tuulooyin Badan oo ay Ururka Daacish gacanta ku hayeen. Dagaalka magaalada Mosul ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo …
Duulaanka Magaalada Mosul ee Dalka Ciraaq oo Maanta Galay Maalintiisii Afaraad (VIDEO)
October 20 , 2016 – Duulaankii lagu qaaday magaalada Mosul ee waqooyiga dalka Ciraaq, ayaa waxa uu maanta galay maalintiisii afaraad ee la doonayo in magaaladaasi looga xoreeyo ururka daacish oo magaaladaasi gacanta ku hayay laga soo bilaabo sanadkii 2014-kii. Dagaalyhanada daacish ayaa adeegsanaya xeelado cusub oo ay doonyaan inay ku hakiyaan duulaanka ku soo …